I-Recipe I-Lemon pie kunye ne-meringue
I-pie le-leyi Le ipayi endiyibonayo kwi-movie "I-Toast". Kwaye ndagqiba ekubeni ndizame ukupheka. Kwangexesha elide andinakuyithandi i-dessert. Izidlo ezithandayo, imilingo nje. Lona ngamava am okokuqala nge-lemon, kwaye ngokuqinisekileyo nge-batch efanayo, kum nje ku-aerobatics, efanelekileyo kakhulu, kwaye ikhulu kakhulu. Ndiyincoma ngokusuka entliziyweni!
Amanzi 6 tbsp. l.
Ijisi le-lemon 125 ml
Ubisi 400 ml
I-Potato isitashi 3 tbsp. l.
Ibhotela 80 g
Inyathelo 1 I-Pie iya kufuna ufulawa, iswekile, ubisi, iilum (iziqhezu ezi-3), iargarine, amaqanda enkukhu (izikhupha ze-Kurds, kunye nama-proteins nge-meringues).
Inyathelo 2 Silungiselela i-shortbread ephilileyo kwaye siyifake efrijini imizuzu engama-30.
Inyathelo lesi-3 Siphumela efrijini, siphume u-2-3 mm ubukhulu (ukuba unqanda kakhulu - ukwandisa inani lezithako), ulifake kwi-mold. Ukulungiswa kakuhle. Sifumana yonke indawo. Ukuxolela i-foil okanye isikhumba kunye nokuthulula nayiphina imithwalo (umzekelo, iipayi, iimbotyi, njl.) Bhaka kwihovini kwi-200-230 ° C malunga nemizuzu engama-20-25, kude kube yiphekwe.
Inyathelo 4 Ukwahlula iiprotheni eziphuma kwiiplaza. Iiprotheni zithunyelwa kwifriji. Siza kubadinga ngenxa yokungena.
Inyathelo lesi-5 Kwi-Kurd siyibhinqa i-lemon ye-1 lemon kwaye sinyusa ijusi ukusuka kwi-3 lemons (125 ml). Esipokeni sityhalala ubisi, yongeza ishukela, ufike kwi-thumba. I-Yolks ifumaneke ngesitashi kwaye ithulule ubisi obisilayo kuwo, ivuselela rhoqo. Sibuyela emlilweni. Ihlala ivuselela kwaye ilinde ukuqina. Yongeza ijusi kunye nejisi. Ukupheka kude kube yimizuzu emihlanu ukuya ku-15 ukuya kufumana ubunzima obufanayo. Kopa kwaye ungeze ibhotela.
Inyathelo 6 Lungiselela i-meringue: whisk kunye nama-200 amagremu eswekile.
Inyathelo 7 Inhlama ithathwa kwi-oven kwaye ishiywe ukupholisa. Inhlama ehlile ikhuphe i-ukhilimu lemon.
Isinyathelo 8 Kusukela kumhlobiso ophezulu we-merengoy, ungasasaza i-spoon okanye i-confectionery isirinji (isikhwama), unike iphethini.
Isinyathelo 9 Beka ikhekhe kwipovini eshushu ngaphambili ukuya kwi-150 ° C imizuzu eyi-10, ukwenzela ukuba i-merenga ihlaziye ngokusuka phezulu. Emva kokupheka, ukupholisa uze ufake efrijini iminyaka engama-2-3. Kuyinto enqwenelekayo ukuba emva kokubhaka ikhekhe imela ubusuku kwifriji, ngaphandle koko iKurd iyakwazi ukusabalalisa.
Ngaba sele ukhulile?
Luhlobo luni lwebhokisi lokuthenga le busika
UCactor Viktor Ilyichev
6 iindlela ezilungileyo zokufumana oko umntu aguqula kuwe
Indlela yokwenza "yakho" nayiphina indawo
Izichumisi zamaminerali zityalo zangaphakathi